IHuawei iyangcolisa umfanekiso we-Samsung ngesibhengezo se-P30 | I-Androidsis
IHuawei ingcolisa umfanekiso we-Samsung ngentengiso ye-P30 kwivenkile yaseMzantsi Korea
Iimfazwe ze-smartphone ziya zinomdla kulo nyaka, ngakumbi phakathi kwe-Samsung kunye neHuawei, njengoko zombini ezi nkampani zezona zinkulu zenza abenzi be-smartphone kwishishini lehlabathi.
Ngeli xesha, njengenxalenye yokuzama ukunciphisa isenzo somnye nomnye, IHuawei ibeke ibhodi enkulu yebhodi Uthotho lwe-P30 ngaphezulu kwevenkile yeSamsung kwiziko lokuthenga eBrisbane, e-Australia. Oku kunokuthathwa njengokuhlekisa, yiyo loo nto iindaba ziphume zingxola.
Zombini uthotho lweHuawei's P30 kunye Galaxy S10 I-Samsung ikhuphisana ngokuthe ngqo enye nenye, njengoko zizixhobo eziphambili zezo nkampani zombini. Oku kubandakanya amanqaku aphezulu. Ke ngoko, Kusengqiqweni ukuba zombini ezi mpawu zizama ukugqogqisa ii-mobiles zazo, njengoko kusenzeka kule meko.
Isamsung yenze ivenkile entle yeflegi.
U-Huawei uthenge intengiso enkulu ngaphezulu kwayo.
-UJen Dudley-Nicholson (@jendudley) Ngamana 4, 2019
Isamsung kunye neHuawei bazibandakanye kwiimfazwe ezifanayo amatyeli aliqela kwixesha elidlulileyo. Kwangoko eDubai, uHuawei wabeka isibhengezo esikhulu sebhodi yeP30 ngokuchasene nesibhengezo seGalaxy S10 yaseKorea. U-Huawei ude wahlekisa nge-S10 yeGPS ngeempawu eziphambili ze-P30 ezinje ngokubonwa kobuso be-3D kunye nezinye ngeakhawunti ye-Twitter esemthethweni.
Elinye ixesha, Iilori zikaHuawei zime kunyaka ophelileyo kwenye yeevenkile zika-Apple, kunye neepowusta zentengiso ezichaza ukuba "iRenaissance iyeza." Esi yayisisibetho kwinkampani yeCupertino, ewe.
I-Huawei igqithe ukuthunyelwa kwezigidi ezingama-206 ngo-2018
Ngokwengxelo yakutshanje ye-IDC, IHuawei inyuse ukuthunyelwa kwayo ngama-50% kwikota yokuqala ye-2019, ngelixa iApple yawa ngama-30%, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Isamsung isephezulu, ngokuthunyelwa kwezigidi ezingama-71.9 kwikota yokuqala, kodwa yabona ukwehla kwe-8.1% kunyaka ophelileyo. Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba intengiso ikhula njani kwintsalela yalo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei ingcolisa umfanekiso we-Samsung ngentengiso ye-P30 kwivenkile yaseMzantsi Korea